We.com.mm - JB ရဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ဟန်မဆောင်နိုင်အောင် ကြေကွဲဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့ Selena
နှစ်ရှည်လများကိုယ်နဲ့အတူတူချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူတစ်ယောက် … ဆယ်နှစ်ဆယ်မိုးလောက်အတူတူလက်တွဲပြီး ချစ်မိုးတွေစွေခဲ့ကြတဲ့ သူတစ်ယောက် ကိုခဏတာအချိန်လေးနဲ့မေ့နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။ ငါမနာကျင်ဘူး၊ မခံစားရဘူးလို့ဘယ်လိုပဲပြောပါစေ .. မျက်နှာပေါ်မှာပြုံးထားပါစေဦး .. ရင်ထဲမှာ ကြိတ်ငိုနေရမှာပါပဲ။ မနာကျင်ရဘူးပြောခဲ့ရင် ကိုယ့်ပါးကိုယ်သာပိတ်ရိုက်ပစ်လိုက် .. အလိမ်အညာတွေထဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လိမ်တာကပိုဆိုးတယ်။
Selena ဆီကနေ JB တစ်ယောက်ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်၊ Selena မရှိရင် သေရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ JB တစ်ယောက် နောက်လေးလလောက်မှာပဲ Haley Baldwin နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆုံးလက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေဟာ Selena ဆီက attention ယူဖို့လုပ်နေတာလို့အစကထင်ခဲ့မိပေမယ့် … နောက်ဆုံးမှာတော့ JB က သူ့မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံ၊ အွန်တာရီယိုမြို့ထဲက ဒေါ်လာငါးသန်းတန်တဲ့ ဧရာမခြံကျယ်ကြီးတစ်ခြံကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ အားလုံးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာ၊ ဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေ၊ ပါပါရာဇီတွေ၊ ဟောလီးဝုဒ် .. အို .. ကုန်ကုန်ပြောရရင် သူတစ်ချိန်က သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ Selena နဲ့တောင်ဝေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ အခြေချဖို့လုပ်ခဲ့တာ ..။ တိတ်ဆိတ်ပြီး ရေကူးကန်ပါတဲ့ခြံကျယ်ကြီး၊ အိမ်အကြီးကြီးမှာ JB နဲ့ အတူတူရင်သွေးလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆိုတာ သူတို့အတူတူမက်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်လေးတစ်ခုပါ။ အခုတော့ အဲ့ဒီအလုပ်တွေကို JB က Haley Baldwin နဲ့အတူတူပြုလုပ်နေခဲ့ပြီ။ ဒါဟာ တကယ်ပဲ Haley နဲ့ JB လက်တွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲလေ ….
JB ဘက်က ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတာမသိရပေမယ့် Selena ကတော့ အဲ့ဒီလိုပဲမှတ်ယူသွားခဲ့ပါပြီ။ နောက်ပြီး သူမရဲ့ဖုန်းထဲက JB နဲ့ couple photo လေးတွေကိုထုတ်ကြည့်၊ သက်ပြင်းချ၊ အဝေးကြီးကိုငေးမော .. တစ်ခါတစ်လေ မျက်ရည်တောင်လည်တဲ့အထိဖြစ်ရတယ် လို့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေကပြောကြတယ်။
လေထဲကတိုက်အိမ်လေးတွေဟာ မတည်မြဲတတ်ဘူး ….
တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ Selena ရဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ ကြေကွဲနေတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကို JB တစ်ယောက်သာမြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အရာအားလုံးကိုပစ်ချပြီး Selena ရဲ့အနားကိုအပြေးလေးပြန်ရောက်လာမလားလို့ပေါ့ ......
8 months ago by Nora